Yini i-Asterisk? Uhlelo lomthombo ovulekile lwe-IP | Kusuka kuLinux
Yini i-Asterisk? Uhlelo lomthombo ovulekile lwe-IP yocingo
Isaka | | Aplicaciones, I-GNU / Linux
Ngokuqinisekile uyazibuza iyini ngempela i-Asterisk. Le phrojekthi yomthombo ovulekile ezinye izinkampani zabo bonke osayizi abakhuluma ngakho kakhulu, kanye nezinye izinhlaka zikahulumeni nezikhungo zezingcingo zabathengisi bezingcingo.
Futhi iqiniso liwukuthi, ukuthandwa kwalo kusekelwe ngokuphelele, ikakhulu ngezikhathi zobhadane, ngoba kungasiza izinzuzo eziningi zeze, njengoba ingumthombo wamahhala ngokuphelele futhi ovulekile.
1 Iyini i-IP PBX?
2 Yini i-Asterisk?
2.1 Kungani kuyipulatifomu ehamba phambili emhlabeni?
3 I-Asterisk ingasiza kanjani ibhizinisi lakho?
3.1 Izinzuzo ze-Asterisk
Iyini i-IP PBX?
Ngaphambi kokuba ngiqale ukuchaza ukuthi yini i-Asterisk nokuthi yenzelwe ini, kufanele uqale wazi yini switchboard yocingo uma ungazi namanje. Yebo, i-switchboard ayilutho ngaphandle kochungechunge lwezixhobo zehardware / zesoftware ukufaka zonke izingcingo ehhovisi, esakhiweni noma endaweni, kusungulwa ukuxhumana nabasebenzisi abahlukile.
Endabeni yokubhekisa ku I-switchboard ye-IPKuyafana nje, kepha kuzosebenzisa amanethiwekhi we-LAN ne-WAN, kusetshenziswa izivumelwano ze-IP ukwenza ukuxhumana. Lokho wukuthi, esikhundleni sokusebenzisa amanethiwekhi wendabuko, izinsizakalo zeVoIP zisetshenziswa kwi-Intanethi.
Impela bekufanele ukwenze shayela Ngaphezu kokuphathwa komphakathi, izinsizakalo zezempilo, noma izinkampani, lapho zikugcine khona ulinde ngenkathi umenzeli ekhululekile ukukusiza. Noma mhlawumbe uphendule imibuzo ethile kumsizi obonakalayo osekudlulisele emnyangweni ofanele ngokwezidingo zakho. Yebo, lolo hlelo luyi-switchboard yocingo ngqo ...
asterisk iyisoftware yamahhala futhi evulekile eyenzelwe ukudala izinhlelo zokuxhumana, njengezinhlelo ze-IP zocingo, i-VoIP Gateways, amaseva wenkomfa, nezinye izixazululo ezenziwe ngezifiso zenkampani noma inhlangano yakho. Yingakho isetshenziswa kangaka yizikhungo eziningi, ohulumeni nezinkampani.
Kukuthuthuka okungaguquguquki, ngakho-ke kungumsebenzi obukhoma ngezibuyekezo ezingaguquki nokulungiswa. Kukho konke lokhu, izisungule njengenye yezinjini eziphambili zama-PBXs asuselwa kwi-IP emhlabeni.
Yize ekuqaleni yadalwa njenge-switchboard software, ezinye izinto ezidingekayo zengezwa kamuva ukwenza uhlelo lokuxhumana oluphelele nolunamandla. Yini enye, I-asterisk iyashisa, enye yamandla uma uhlela ukuyivumelanisa nezinhlangano zazo zonke izinhlobo zosayizi. Kusuka kuma-SME adinga okuthile okulula ukuxhumanisa izingcingo ezingenayo neziphumayo, ziye ezikhungweni zezingcingo eziyinkimbinkimbi kakhulu.
Ngokungafani nezinhlelo zefoni zendabuko, asikho isidingo sokuvuselela ukufakwa kwehardware ebizayo. Ngaphezu kwalokho, abathuthukisi bayo banesibopho sokuletha ukuthuthuka minyaka yonke ukuze uhlelo ludinge ukunakekelwa okuncane futhi luzinze ngangokunokwenzeka.
Kungani kuyipulatifomu ehamba phambili emhlabeni?
I-Asterisk akuyona nje noma iyiphi inkundla, ingomunye wabaholi njengoba sengishilo. Ivumela ukudala i-switchboard ngokususelwa kule phrojekthi futhi esebenza ngokugcwele. Futhi ine izici ezigqamile kuqhathaniswa nezinye izinsizakalo ezifanayo:
Umsebenzi wokuqopha ucingo othomathikhi noma ofunwayo, onemisebenzi yevoyisimeyili ethuthukile.
Amandla wabasebenzeli bendawo nabakude ukusungula isikhungo sabo sokuhlinzeka ngamakhasimende noma kuphi emhlabeni.
Isikhonzi esizenzakalelayo sokwamukela nokuphathwa kwezingcingo ezingenayo.
Uhlelo lokwenza nokuphatha ulayini wezingcingo ngempumelelo phakathi kwama-ejenti atholakalayo, okwenza amakhasimende alinde nokuwagcina elindile.
Impela munye enye indlela enhle ye-3CX ngokwezinhlelo zefoni ze-PBX.
Imininingwane engaphezulu - I-asterisk iwebhusayithi esemthethweni
I-Asterisk ingasiza kanjani ibhizinisi lakho?
asterisk ubuchwepheshe obuthakazelisa kakhulu bebhizinisi, noma ngabe uzisebenza. Noma kunjalo kakhulu ezikhathini zobhadane, ngoba ingakunika izinzuzo eziningi zokuzivumelanisa nezimo ezintsha futhi uqhubeke nokusebenza ngokujwayelekile. Ngayo ungaguqula i-PC yakho ibe yiseva yezokuxhumana ye-VoIP eyinkimbinkimbi ukwenza lula usizo ngocingo lwamakhasimende akho.
Njengoba ngishilo ngenhla, i-Asterisk isetshenziswa kuzo zonke izinhlobo zezinkampani nezinhlangano. Kusuka kwabanye abasebenza ngokuzimela asebevele basebenzisa i-switchboard ye-IP, ezinkampanini ezinkulu ezifana ne-IBM, Google, ohulumeni, njll. Eqinisweni, isivele inesabelo se-18%, ngoba ingumthombo ovulekile, okhululekile, futhi onamandla amakhulu.
I-Asterisk ingesinye sezinhlelo ezinokusebenza okwengeziwe, okungahambeki kalula, futhi kungenye yalezo ezinikeza ukuzinza okwengeziwe. Futhi, ngaphezu kwakho konke, iyatholakala ku- amapulatifomu ahlukahlukene: I-GNU / Linux, i-MacOS, i-BSD ne-Windows.
Lapho ukhuluma nge Ukushintshaniswa ngocingo kwe-IP, noma i-IP PBX, kubhekiswa kwifoni eyodwa (noma kumakhasimende) e-SIP kanye neseva okuyiyona ongayikhweza nge-Asterisk kwi-PC yakho. Ngamanye amagama, uhlelo luzoba nalezi zingxenye ezimbili, ngakolunye uhlangothi isoftware ngakolunye uhlangothi amatheminali.
Ukuze? Kulula kakhulu, ngale ndlela ungenza ucingo lwangaphakathi ngokusebenzisa i- isiqondisi sefoni / somsebenzisi ekhona kunethiwekhi yangaphakathi, noma futhi uhambise izingcingo zangaphandle ngeVoIP. Ngaleyo ndlela, ungasetha isikhungo sakho sezingcingo ukuze ukhonze amakhasimende akho, uhlukanise izingcingo ezingenayo ngeminyango noma ngabasebenzi, njll.
I-Las izinzuzo yalesi simiso esetshenziswe yi-Astreisk yile:
Te izosiza ukufakwa nokucushwa yebhodi lakho lokushintshela ngocingo, ngoba lisebenza nge-software, esikhundleni sezinhlelo zehadiwe ezibizayo neziyinkimbinkimbi.
I-Asterisk futhi ivumela i- ukuphathwa okulula ngenxa yesixhumi esibonakalayo sayo esilula futhi enembile.
Ukonga okubalulekile ngokusebenzisa i-VoIP telephony esikhundleni sokuthola izinkontileka ezibizayo zezinsizakalo zocingo lapho amabanga amade noma izingcingo zomhlaba jikelele zivame ukubiza.
Awudingi ukwenza ushintsho ekhaya lakho, esikhundleni sakho esisha sokusebenza ngocingo, noma ehhovisi lakho, selokhu asikho isidingo sezintambo ezikhethekile.
Ukuze ube iyahlatshwa, uzokwazi ukwengeza amaklayenti (izingcingo) ukuze iminyango eminingi noma opharetha bajoyine inethiwekhi yosizo.
Njengoba yenza umsebenzi wakho ube lula kakhulu futhi ikuvumela ukuthi ushayele izingcingo, uzihambise ku-opharetha okhululekile ngaso sonke isikhathi, njll., Izokusindisa ekubeni udlulisele ucingo ngesandla izothuthukisa kakhulu umkhiqizo.
I-Asterisk ivumela ukusetshenziswa kwamafoni we-SIP, okuthuthukisa izindlela ze- usability.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Yini i-Asterisk? Uhlelo lomthombo ovulekile lwe-IP yocingo
Umbhali weLibreboot uvikela uStallman njengoba abanye beqhubeka nokushiya kwiFOSS
Isikhishwe isibuyekezo esisha seManjaro Linux 21.0